Fitohizan'ny hafatra : TSy hitako koa ny lojikan'i Gasy1zay izany: ilay T...
rhaj0 - 05/03/2018 22:22
TSy hitako koa ny lojikan'i Gasy1zay izany: ilay TSY-Mino koa ve no nanota, dia i Jesoa no naty???
Nefa azany i Jesoa dia efa nanome mission ny tenany hamono izay TsY-Mino izy teo? sa moa natsangan'i Jesoa ho fahavalo ireo TSY-MIno? Raha tsy diso aho ohatra, dia i JEsoa mihiintsy no niteny hoe, alaviro ireo TSY-Mino, na koa hoe, aza ampidirina an-trano.
Sa moa... ianao Mpino no ampirisihan'i Jesoa hiady @ ireo TSY-Mpino, fa i Jesoa any ambadika any ... tsihaitsihay.
gasy1zay - 05/03/2018 22:39
hahahaha tena tsy mahalala ny voasoratra marina i rhaj0 ka! anisan'ny vava nahazo an'i Jesoa hono anie avy amin'ny mpanora-dalana hoe fa maninona hono izy no miaraha-mihinana amin'ny mpanota?
Miady amin'ny Tsy-mino aona ndray ary? aiza koa no misy an'zany sao dia diso famaky i rhaj0 raha namaky an'ito ohatra :
Sal 34:14 Halaviro ny ratsy, manaova soa; mitadiava fihavanana, ka araho izany.
halaviro ny ratsy fa tsy ny Tsy-mino (sa mahatsiaro tena ho ratsy i rhaj0 )
dia ito koa :
Rom 12:18 Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin’ ny olona rehetra.
Bon, aza dia mamorona re ry rhaj0 rehefa tsy mino ihany fa mba aleo manadihady vao miteny/manoratra tsy sorena akory aho an! fa mapme ilay eritreritr'i rhaj0, izy kay zany mihevitra fa miady aminy ny mpino (hono).
rhaj0 - 06/03/2018 14:38
I Jesosy SAIN'ADY ve ry Gasy1zay dia mbola tsy hainao foana? Jereo tsara eraky ny Matio/Marka/Lioka/jaona, fa raha vao tsy @ eritrertr'ilery, tonga dia miala any i LIAN'ADY.
33	Fa na zovy na zovy no handà Ahy eo anatrehan'ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan'ny Raiko Izay any an-danitra.
34	Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany Aho; tsy tonga hitondra fiadanana Aho, fa sabatra.
35	Fa tonga Aho hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozanivavy;
36	ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony.
Ny resa-Baiboly tsindrotsindrohanao re ry GAsy1zay, dia ny an-dry Paoly sy ny namany, izay miezaka manarina ny resaka SAIN'ADIN'iJesosy.
Io foana no hitako @ Kristiana eee... Ary GAsy1zay no santionany ohatra velona eto. Ny "fiainan'I Jesoa" ao @ Matiomarkaliokajaona dia TSY vakian-dry KRistiana Gasy1zay akoriny. Raha mba mamaky azany zareo, dia TSISy tadiidiny akoriny. Nefa ho'a anie boky kely ananki-4 fotsiny ee.. Ny Harry Potter efa ho 1000 pejy tadidin'ny tia azy tsianjery h@ point sy virgule...
gasy1zay - 06/03/2018 16:15
Fa iza no tena mitsindroka andininy eto e? Izahay sa i rhaj0 ? Rehefa tsy tianao ilay resaka Andriamanitra fitiavana ao anaty baiboly fa mitady zay mampetipety ny tsy finoanao ao ianao dia tsy olana , haveriko foana fa amina miliara hoa zay no resy lahatra ny fitiavany.
rhaj0 - 06/03/2018 16:20
Ka ahoana io Matio 10:35-36 io ry Gasy1zay? Miombom-peo sy miombom-po @ sain'ady ve ianao?
gasy1zay - 06/03/2018 16:42
Oadray ka tsy hianao ihany ve no nitantara ireo kristiana nodarofan'ny Assad baomba e? Jereo ao amin'ny google ao fa maro ohatra ireo silamo niova ho kristiana no iadivan'ny fianakaviany, roahiny tsy ho mpianakaviny intsony, Ka io anie efa t@ voalohany dia tena nenjehana ho faty ny kristiana satria dia ny Jiosy maro no tsy nino hoe i Jesoa no Kristy! Ka dia zay nanaraka an'i Jesoa dia nohenjehin'ireo tsy nino azy, t@ zany ka hatramin'izao.
rhaj0 - 06/03/2018 20:12
Tena asa na izaho no surmené na i Gasy1zay no surmené, fa @ resaka valian'i GAsy1zay io k'lou, dia inona kosa ho'a ny idiran'ny Silamo @ ilay rangahy sain'ady sy lian'ady, mampiady ny fianakams, ka nanao hoe:
... hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozanivavy ... ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony.
Averina indray fa hafahafa ihany mantsy ny famakin-dry Gasy1zay resaka:
"... tonga Aho hampifandrafy ..."
gasy1zay - 06/03/2018 20:54
hahahaha ka i rhaj0 ve mihevitra hoe misy miady sy mifandrafy raha tsy misy tsy fitoviankevitra, fomba fijery, finoana sns e! Nga moa any amintsika tsy misy hoe tsy mifampiditra ampasana rehefa tsy manaiky mamadika ohatra satria tsy mety amin'ny kristiana ilay mamadika. Ka izay ilay hoe misafidy ianao na ny finoanao na ny fomban-drazana sy ny fianakaviana.
gasy1zay - 06/03/2018 20:58
hono hoa rhaj0, ianao koa ve zany nitsingoloka tao @ coran nitady andininy azo kianina tao sa ny baiboly ihany no tena mampa alerzika anao?
rhaj0 - 06/03/2018 21:12
rhaj0 ilay rangahy sain'ady sy lian'ady, mampiady ny fianakams, ka nanao hoe:
ny @ coran sy torah indray dia mitovy trosy @ baiboly ihany izany eee... Samy Abrahamistes ianareo Jiosy/Kristiana/Moslimo, ary ilay Andrmntr'i Abrahama TOKANA no ivavahanareo rehetra ao kouh...
Sa tena TSY mitovy ny Andmntra ivavahanareo ry GAsy1zay?
gasy1zay - 06/03/2018 21:20
Ny an'zareo hono toa tsisy resaka Fanahy Masina sy Zanany nomeny antsika mba hazoantsika ny lanitra fa mila miady mafy ianao manao asa soa dia rehefa maty hono lanjaina ny soa sy ny ratsy dia zay valin'ny mizana eo no mitondra hoe miakatra sa midina ( hono fa za tsy namaky coran).
rhaj0 - 06/03/2018 21:35
Hay va re, na dia TOKANA azany izao Andmntr'i Abrahama izao, dia lasa SAMY HAFA HONO ny kôziny @ Kristiana sy Jiosy ary Moslimo.
(Mety) marina tokoany izany anao izany ry GAsy1zay an.. nefa aloha, raha ny fahatakarako azy, dia mety ireto olona J/K/M no lalodalovana, dia mamalan-dresaka.. sahala @ GAsy1zay izao io ihany io ee.. afangarongaron'ilery @ finoana primitive-ny ny resaka serieux (-mbaiboly).
Ka dia na resaka TOKANA azany HONO ny ambaran'iilay Andrmntra TOKANA, dia samy manabilabila izay "re-ny" tao ny J/K/M... sahala @ resaka TOKANA (-mbaiboly) ho an'I Kristiana ihany io: samy manabilabila azy @ saim-pantany ao daholo ry Gasy1zay sy RBNIr eto ohatra...
gasy1zay - 06/03/2018 21:50
ito misy video hoan'i rhaj0
rhaj0 - 08/03/2018 16:19
lavabe ny resaka boribory fa ny voasintoko aloha dia.. ity izany HONO izany Dieu izany ee..
Nanipika ary naverimberin'ilay Rangahy tao @ pejy namen'i Gasy1zay tsara, fa:
"raha mijery/mahita Azy io ianao, dia toa ny mijery/mahita an'i Dieu."
Da capo, ad nauseum.
endriny - 08/03/2018 17:05
Taloha tokoa dia hita vatana sy azo tsapain-tanana ny Atra tao Mediteranea tao. Kisoa vavy fotsy sy matavy nantsoina hoe Maokiosy ireo. Ary tsy azo nohanina fa ny zanany ihany no azo hanina. Dia notompoina sy nampihaingona mihintsy. Alevina mihoatra ny mpanjaka.
Ka eto Madagasikara koa aza betsaka an’ireo Atra ireo a.